Duqeyn Xoogan Oo Xalay Ka Dhacday Magaalada Garbahaarey Ee Gobolka Gedo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Duqeyn Xoogan Oo Xalay Ka Dhacday Magaalada Garbahaarey Ee Gobolka Gedo
By Xuseen Axmed	 Last updated Jul 29, 2017
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi duqeyn xoogan xalay ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka Kenya.
Duqeynta ay geesteen Diyaaradaha Dagaalka Kenya ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday Saldhig Ururka Al Shabaab ay ku leeyihiin Deegaanka Kulbis ee Magaaladda Garbahaarey.
Saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland ayaa sheegay in Duqeynta xalay ka dhacday Deegaanka Kulbis ay sababtay Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la tilmaamay in Shabaabku ay kasoo gaartay Khasaaro aad u badan.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Dagaalyahanada Ururka Al Shabaab iyo dowlada Kenya taas oo ku aadan Duqeyntii Diyaaradeed ee xalay ka dhacday Magaaladda Garbahaarey ee Gobolka Gedo.
Kaniisad Laga Furay Magaalada Hargeysa